Pork Sticks Shop Restaurants | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Phone - 09 795425070
Address - Junction Square, Kamaryut ()
Price Range - 3000Ks - 19000Ks
Phone - 09 428234564
- ပွဲကြီးခေါက်ဆွဲ၊ ပွဲကြီးကြက်ဆီထမင်း၊ ၀က်နံရိုးစတူး၊ ကြက်စတူး၊ အမဲလုံးဟင်းရည်၊ ၀က်သားလုံးဟင်းရည်
Address - No. 39, Room 08, Ground Floor, Nawaday Street, Dagon Township. (ဒဂုံ(၁)ကျောင်းရှေ့၊ န၀ဒေးလမ်းနှင့် အလံပြဘုရားလမ်းထောင့်၊ ဒဂုံမြို့နယ်။)